४ पन्नाको पत्र लेखेर आफ्नै कोठाबाट मध्यरातमा निस्किएकी दुर्गा शर्मा कहाँ होलिन ? [नालीबेलीसहित] – Jaljala Online
साउन २६, काठमाडौं । यो खबर दीपक खरेलले नेपालखबरमा लेखेका छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको अपराध अनुसन्धान हेर्ने डिएसपी होविन्द्र बोगटी आइतबार दिउँसो आफ्नै कार्यकक्षमा थिए।
उनी एउटा फाइलमा घोत्लिरहेका देखिन्थे। त्यो फाइल २३ दिनदेखि काठमाडौं चावहिलबाट हराएकी ३४ वर्षे दुर्गा शर्मा खोजतलासका लागि संकलित प्रमाण र जानकारीसँग सम्बन्धित हो।
‘भौतिक र प्राविधिक दुवै साधन प्रयोग गर्दै उहाँको खोजी गरिरहेका छौं,’ डिएसपी बोगटीले नेपालखबरसँग भने ‘सोधपुछ र खोजीमा हामी सक्रिय छौं।’
चावहिलस्थित डेराबाट सुतिरहेका श्रीमान् र छोरा छाडेर नेपालगञ्जकी दुर्गा शर्मा ३ साउन २०७६ को एकाबिहानै घरबाहिर निस्किइन्। त्यसपछि उनी सम्पर्कबिहीन भइन्। घर छोडेर हिँड्ने राति साउन २ गते उनी एक्लै सुतेकी थिइन्। श्रीमान् कपिल शर्मा र छोरासँगै सुतेका थिए।
अध्यापन पेशामा संलग्न कपिल बिहान पाँच बजे उठ्दा दुर्गा कोठामा थिइनन्। घरको मूल ढोका बाहिरबाट बन्द थियो। उनले भाई करुण शर्मालाई फोन गरेर ढोका खोल्न लगाए।
दुर्गाका श्रीमान कपिल उनी हराएकै बिहान खोजतलासका लागि महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशाला पुगे। त्यहाँ निवेदन दिए। उनले दुर्गाले ‘तीतो सत्य शीर्षक’मा लेखेको विदाई पत्र समेत प्रहरीलाई बुझाए। कपिलले प्रहरीमा खबर गर्नु अघि दुर्गाको माइती पक्षलाई समेत खबर गरेका थिए।
‘उहाँले लेखेको पत्रका आधारमा प्रहरीले उपत्यकामा बग्ने सबै नदीका किनारदेखि गहिरो स्थानसम्म खोजी गरेका छौं’, डिएसपी बोगटी भन्छन्, ‘कुनै दुर्घटना भए त अहिलेसम्म बाहिर आउनुपर्ने हामी आफैँ अचम्ममा छौं।’
दुर्गाले लेखेको पत्रमा आफूलाई श्रीमान् र उनका परिवारले यातना दिने गरेको विषय उल्लेख छ। पत्रमा उनले आफू ‘पानीमा डुबुल्की लगाउन’ जाने उल्लेख गरेकी छिन्। यही सन्दर्भ पछ्याउँदै प्रहरीले उपत्यकामा रहेका नदीनालामा विशेष खोजी गरिरहेको हो।
प्रहरीले अनुसन्धानका लागि दुर्गाले प्रयोग गर्ने दुई वटै मोबाइलमा रहेका नम्बरको कल डिटेल निकालेको छ। श्रीमान् कपिल र दुर्गाकी दिदी लक्ष्मी समेतको कल डिटेल निकालेर विश्लेषण गरिरहेको छ।
प्रहरीले दुर्गा शर्मा खोजीबारे तयार गरेको लामो प्रतिवेदनमा ३ गतेदेखि खोजी जारी रहेको उल्लेख छ। खोजीका लागि कल डिटेलसहित दुर्गाले चलाउने सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र म्यासेञ्जरको समेत विज्ञ समुहले विश्लेषण गरेको छ।
‘प्राविधिक विश्लेषणबाट समेत कुनै शंकास्पद कुरा भेटिएन,’ डिएसपी बोगटी भन्छन्, ‘जंगल, खोलानाला र आफन्त केही बाँकी राखेनौं खोजी गर्न तर भेटिनु भएको छैन।’
प्रहरीले दुर्गाको खोजीका लागि मैजुबहालबाट ओरालो गौरीघाट जाने बाटोमा रहेको ए वन क्याफे र गौरीघाटबाट चावहिल पीपलबोट अगाडिको सिसिटिभी फुटेज समेत मगाएर हेरेको थियो। दुवै क्यामरामा दुर्गा हिँडडुल गरेको देखिएको छैन।
प्रहरीले उपत्यकाका भन्डारखाल, विश्वरुपा र शिवपुरी जंगलमा तालिम प्राप्त कुकुर र परिवारका सदस्यसहित खोजतलास गरेको छ।
‘अमेरिका जाने बिषयबाहेक बाहेक अन्य विषयमा विवाद समेत देखिएन,’ डिएसपी बोगटीले भने ‘हामी अझै खोजीमै छौं, परिवार समेत खोजीमा सक्रिय हुनुहुन्छ।’
साउन ६, काठमाडौं । यो खबर दीपक खरेलले नेपालखबरमा लेखेका छन् । उनी बिएड पास हुन्। ३४ वर्षकी दुर्गा शर्माको माईत बर्दिया हो। बुवा कुलप्रसाद पौड्यालले नेपालगञ्जमा व्यवसाय थालेयता सपरिवार पुष्पलाल चौक नजिक बस्छन्।
उनको कलेजमा अध्यापन गर्ने कपिल शर्मा न्यौपानेसँग १० वर्ष अघि मागि विवाह भएको थियो। दुबैबाट नौ वर्षका एक छोरा छन्। श्रीमान कपिल दिनभर चावहिल डेरा नजिकको सेन्ट लरेन्स कलेजमा ब्यस्त हुन्छन्। दुर्गा छोरा र घरको काममै ब्यस्त हुन्थिन्।
दुर्गा र श्रीमान् बिचको सम्बन्ध सुमधुर देखिन्थ्यो। तर, बाहिर सुखी र खुसी देखिएको सम्बन्ध भित्रभित्रै खोक्रो बनेको रहेछ। दुर्गा शर्मा हराएको तीन दिनमा उनीहरुको सम्बन्धका छिद्रहरु प्रष्ट भएका छन्।
दुर्गाले चार पृष्ठ लामो आफ्ना वेदनाको कथा तितो सत्य शिर्षकमा लेखेर शुक्रबार बिहानदेखि सबैबाट सम्पर्क बिहीन छिन्। यतिबेला काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला सहित देशभरका प्रहरी दुर्गाको खोजीमा जुटेका छन्।
बिहीबार साँझ दुर्गा र कपिल बिचमा छोराको पढाईको बिषयलाई लिएर सामान्य झगडा भएको थियो। त्यो रात कपिल छोरासँग सुते। दुर्गा अर्को कोठामा सुतिन्।
‘म कलेज जान बिहान उठदा ढोका बाहिरबाट बन्द थियो,’ कपिल शर्माले नेपालखबरसँग भने ‘दुर्गा हामी दुबैलाई छोडेर कहाँ गईन थाह छैन।’
यतिबेला महानगरीय प्रहरी कार्यालय मातहत रहेका तीनवटै परिसरले दुर्गाको खोजी गरिरहेका छन्। यस्तै प्रहरी सञ्चार मार्फत दुर्गाको हुलिया ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालामा दुर्गाका बुवा कुलप्रसाद पौड्यालले आइतबार ज्वाईं कपिल शर्मा न्यौपानेलाई विपक्षी बनाउँदै छोरी खोजीदिन निवेदन दिएका छन्। उनले दिएको निवेदनमा आफ्नी ३४ वर्षीया छोरी हराएको र ज्वाईं तथा उनको परिवारमाथि शंका रहेको उल्लेख गरेका छन्।गौशाला वृत्तका डिएसपी प्रदिपकुमार सिंह दुर्गा जानसक्ने सम्बन्धित सबै स्थानमा प्रहरीले खोजी जारी राखेको बताउँछन्। उनले परिवारका सदस्य र छरछिमेकीसँग सोधपुछ समेत भएको बताए।
‘हामी लगातार उहाँको खोजीमा लागेका छौं,’ डिएसपी सिंहले भने ‘कल डिटेल समेत निकालेर अनुसन्धान भइरहेको छ।’ वृत्तका अनुसार प्रहरीले दुर्गाले पत्रमा भनेजस्तै उनले कतै आत्महत्या गरिन् कि भनेर खोलानाला र जंगलमा समेत उनको खोजी भइरहेको छ। प्रहरीले परिवारका सदस्यलाई सँगै लिएर चोभार, थानकोट र सुन्दरीजलमा समेत दुर्गाको खोजी गरिरहेको छ।
प्रहरीका अनुसार दुर्गाले आफुसँग रहेको मोबाईल घरमै छाडेकी छन्। उनी सामान्य लुगामा छाता बोकेर घरबाट निस्किएकी छन्। उनले साथमा पैसा समेत नबोकेको परिवारका सदस्यले प्रहरीलाई बताएका छन्।
नेपालखबरलाई प्राप्त चार पृष्ठ लामो पत्रमा आफू र छोरा श्रीमान् कपिल र सासु तथा परिवारका सदस्यबाट पीडित भएको उल्लेख गरेकी छन्। उनले पत्रमा श्रीमान् कपिलले छोरालाई कुटपीट गर्ने र आफूलाई समेत गाली गलौज गर्ने गरेको उल्लेख छ।
‘कलेजका स्टाफहरुलाई श्रीमती हो भनेर चिनाउन नहुने अनि छोरा जन्मेपछि त कसैले थाह पाउला जस्तो लुकाउनुपर्ने कसैले थाह पाउला कि चिन्ला भन्ने डर’ दुर्गाले पत्रमा लेखेकी छन् ‘म भोलीका दिन पागल जस्तै कसरी बस्नु त्यसैले पानीमा डुबुल्की लगाउँदै छु।’
‘बहिनीको खोजीमा हामी परिवार जुटेका छौँ, प्रहरीबाट पनि सहयोग भइरहेको छ,’ नेपालखबरको सम्पर्कमा आएका आचार्यले भने ‘कतै गएर बसेकी छन् कि कुनै दुर्घटना भयो, चिन्तित छौँ।’
Posted on November 12, 2019 Author Jaljala Online
कात्तिक २६, डडेल्धुरा । डडेल्धुरा अस्पतालभित्रको भित्री कक्षमा प्रा.डा. गोविन्द केसी छटपटाइरहेका थिए । त्यसैबेला कपिलवस्तु तौलिहवाकी शोभा अर्याल डा.केसीलाई भेटेर फर्किरहेकी थिईन् । उनले भनिन- ‘उहाँका माग जायज छन् र, न्यायिक पनि छन् । ’ यो खबर प्रशान्त वलीले राजधानी दैनिकमा लेखेका छन् । अस्पतालको सानो कोठामा डा. केसी अनसन बसेका छन् । उनलाई […]
Posted on June 4, 2019 Author Jaljala Online
जेठ २१, काठमाडौं । प्रहरीले रामेछाप घर भएकी ६ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने एक वृद्वलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका–९ लुबु लामाटार घर भएका ६९ वर्षीय शिव प्रसाद घिमिरे रहेका छन् । घिमिरेले गत जेठ १५ गते स्कुलबाट घर फर्किरहेकी बालिका (नाम परिवर्तन) सोनियालाई ललाईफकाई घर लगेर बलात्कार गरेको महानगरीय प्रहरी […]
Posted on August 20, 2019 August 21, 2019 Author Jaljala Online
भदौ ४, चितवन । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले आफूले पुडासैनीको भिडियो नहेरेको बताएका छन् । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा सोमबारको बयानका क्रममा लामिछानेले आफूलाई गाली गरेको र आरोप लगाएको भन्ने अरु मार्फत सुनेको तर आफूले भिडियो नहेरेको बताएका छन् । पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको […]